Ukuxela ukuFunda | Martech Zone
Ukuba andinanto ndinokubhala ngayo kwibhlog yam, ndihlala ndikhangela kwaye ndifumana amakhonkco amangalisayo kwaye ndabelana ngawo endaweni yoko. Ukuba uthatha ixesha ukubuyela kwindawo yam okanye ubhalisele ukutya kwam, ndifuna ukuqinisekisa ukuba andichithi xesha lakho ngesiqingatha-esile ngeposi.
Ngaphandle kwemizamo yam, ezinye zezithuba zam zezinto ezinukayo kwaye abanye bafumana itoni yoqwalaselo. Emva kokubhloga iminyaka ngoku, akunakwenzeka ukuba ndiqikelele ubufundi bam. Ndicinga ukuba kunjengokubaleka ukubuyela umva ukuzama ukuqikelela umdlalo olandelayo. Amaqela ebhola ekhatywayo aphumeleleyo anokuhlala engaguquguquki kwaye aqubule. Badlala yonke indawo ezantsi ngokungathi yeyokugqibela ezantsi. Ibhola, bathi, ngumdlalo wee-intshi.
Ukuphumelela kwiiblogi kuyafana. Umgca omkhulu okhuselayo usenokubanjwa kwaye uphulukane neyadi ethile, kodwa xa iyonke, baya kutyhalela phambili baye ezantsi kuqala. Andikwazi ukuqikelela ukuba zeziphi izithuba zam (ibhola ekhatywayo = imidlalo) eya kundifaka kwindawo yokuphela. Ndiyazi ukuba ukungaguquguquki okukhulu kunye neempazamo ezimbalwa ziya kundisa apho, nangona kunjalo.
Ngenxa yoko, andinaxhala nokuba okanye hayi lo Iposi iya kuba ngoyedwa, ndiyazi kuphela ukuba ndiyaqhubeka nokubhloga rhoqo kwaye ndibhloga kakuhle ukuba ndiza kuqhubeka nokufumana abafundi (ibhola ekhatywayo = iyadi). Ukhuphiswano lunzima, nangona kunjalo.
Okwangoku ndiphikisana nomntu wonke okwiholide, ezona zithuba zibalaseleyo zika-2008 kunye noqikelelo lomntu wonke ngo-2009. Ukhuphiswano lokwenyani lunam, nangona kunjalo. Ukhuphiswano alufumani xesha lokuposa. Ukhuphiswano aluphandi ngeposi ngokwaneleyo ukuba likushiye kunye ne-kernel yolwazi oluzileyo.
Ifoto emangalisayo nge UBrian Cassella, umfoti weendaba
Ngo-2008, iblogi inekota yesigidi seendwendwe ezinababhalisele kufutshane ne-2,000 (imeyile + RSS). Khange ndiqhubeke nokukhula kule bhlog bendinayo ngaphambili-ubukhulu becala ngenxa yokhuphiswano lwam. Utshintsho emsebenzini alundivumeli ukuba ndibeke ixesha kunye nomzamo kwibhlog ekufuneka ndinayo. Kutshanje, bendijika ezo zibalo kwaye ndibuyele ekuphakameni kwakhona.
Ndijonge phambili ekufumaneni ezimbalwa kwindawo yokuphela ngo-2009!
tags: ukuqonda kwentengisoumbonisoukwenziwa kwemizoboezifanaubuchule bokusebenza kweinjini yokukhangelaizilayidi zesilayidii-solomo
Ngomhla wama-28 ku-Disemba 2008 ngo-8: 48 PM
Uninzi lweeblogi zikhutshiwe, amagqabantshintshi ngobuqu axhaswe yimizuzu elishumi kwiinjini zokukhangela. Into ehlekisayo ayisiyiyo yokuba ezinye zilungile kwaye ezinye zimbi, okanye ezo ezinye ziyathandwa kwaye ezinye azikho. Eyona nto inomdla kukuba sinomdla kakhulu sebenzisa kunye nentlonipho Umxholo ongqongqo kancinci kuphela kunencoko nje.
Ndiqikelela ukuba ukuqikelela ukufunda- kunye nokufunda gan- kuya kuba nzima ngakumbi njengoko ukubhloga kuqhubeka nokukhula ekuthandeni. Kude kube le nto izinzile, apho siya kuthi sibe nethemba lokuyiqonda eyona nto iyiyo.